သူကြီးမင်း (တုံးဖလား): February 2015
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 20:00 1 comment:
အာဏာရှင်မှန်ရင် ဘယ်အာဏာရှင်ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် အုပ်ချုပ်ခံ လူတန်းစားတွေကို အသာလေး ထိန်းထားလုို့ရတယ်။ လူတွေအများစုက အာဏာရှင်ကို သိပ် ကြိုက်ကြတာ မဟုတ်လား။ စာကျက်ပျင်းတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ဆရာ ဆရာမတွေ ပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားလုိုပေါ့။ ဒီကလေးတွေ ကြိမ်ဖူးဟင်း အတော်ကြိုက်တယ် ဆုိုပြီးတော့လေ။ ကြိမ်တုို့မှ ပုိုပြေးကြတာ မဟုတ်လား။ ဘာမှ မပူပါနဲ့။ အာဏာရှင် ပုိုဆန်လေလေ ပုိုလိုက်နာလေလေ ပုိုနာနာရုိုက်လေလေ ပိုသစ္စာရှိလေလေလေ။ အခုဘဲကြည့် ဘုရားရှင်က အာဏာနဲ့ အုပ်ချုပ်လုိုက်တဲ့ အခါမှာမှ သာသနာဟာ အတော်လေး ငြိမ်သွားခဲ့တယ်။
အဲ အာဏာရှင်လုပ်မှာဖြင့် ပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်ဖုို့တော့ လုိုတယ်။ အာဏာရှင်ယောင်ယောင် မေတ္တာရှင်ယောင်ယောင် ဆုိုရင်တော့ ဟုိုနားစုစု ဒီနားစုစုနဲ့ အသင်းတွေစု အဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီး ခြေရာလာတုိုင်းကြမဲ့ သတ္တိခဲလေးတွေ မှိုလုိုပေါက်လာကြလိမ့်မယ်။ အာဏာရှင်ဆုိုလဲ အာဏာရှင်ပီသမှ မေတ္တာရှင်ဆုိုလဲ မေတ္တုာရှင်ပီသမှ။ နုို့မဟုတ်ရင် အဟလေး မြင်လုိုက်တာနဲ့ တန်းဝင်ပြီးသားဘဲ။ ဒေ၀ဒတ်ကုိုဘဲ ကြည့်လေ။ ဘုရားရှင် ဒီလောက် အာဏာပြဌာန်းထားတာတောင်မှ နုိုင်ငံရေး ထလုပ်လုိုက်သေးတယ်။ အဇာတသတ်မင်းကုို အပိုင်သိမ်းသွင်းလုိုက်တယ်။ ပြီးတော့ သူပြောတဲ့ စကားကိုလဲ ကြည့်ဦး။ အဇာသတတ်ရေ.. မင်းက မင်းအဖေ ဗိမ္ဗိသာရမင်းကို သတ်ပြီး ဘုရင်လုပ်။ ငါက ဘုရားရှင်ကို သတ်ပြီး ဘုရားလုပ်မယ်။ ဒီတော့ မင်းကလဲ ဘုရင်ဖြစ် ငါကလဲ ဘုရားဖြစ် ဘယ်လောက် ပျော်ဖုို့ ကောင်းလုိုက်မလဲ တဲ့။
အင်း... ဒေ၀ဒတ်က ရဟန်းတန်မဲ့ နုိုင်ငံရေးတွေ လုပ်စရာလား။ မေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒေ၀ဒတ်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ လုိုအပ်ရင် ဘုရားရှင်ကိုယ်တုိုင်လဲ နိုင်ငံရေး လုပ်ရတာပါဘဲ။ နုိုင်ငံတော်ကုို အန္တရာယ်တစ်ခုခု ကျရောက်တော့မယ့်အခါမျိုး၊ အမျိုးဘာသာသာသနာကုို ထိခိုက်နုိုင်မဲ့ အခါမျိုးတွေမှာပေါ့။ ဥပမာ ကပိလ၀တ်ပြည်နဲ့ ကောလိယပြည် စစ်ပွဲကိုကြည့်။ ရောဟိနီမြစ်ထဲက ရေကို လုကြရင်းနဲ့ သာကီဝင်တွေ အချင်းချင်း စစ်ကြေငြာပြီး ဟုိုဘက်ကမ်း ဒီဘက်ကမ်း လက်နက်တွေ အဆင်သင့်တပ်ဆင်ပြီးသား။ ပစ် ဆုိုတဲ့ အမိန့်ကို စောင့်နေတုန်း။ ပစ်မိန့်ရကာနီးလေး ဆဲဆဲမှာမှ ဘုရားရှင် ရောက်လာပြီး ထာဝရအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လုပ်ပေးလုိုက်တယ်။ ဒါနုိုင်ငံရေးဘဲပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒေ၀ဒတ်ရဲ့ နိုင်ငံရေးက အမျိုးဘာသာသာသနာ ထိခုိုက်ကွဲပြား ဆုံးရှုံးရမဲ့ နုိုင်ငံရေး။ ဘုရားရှင်ရဲ့ နုိုင်ငံရေးက အမျိုးဘာသာသာသနာ မပျောက်မပျက် စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိအောင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့ နုိုင်ငံရေး။
မြန်မာ့သမုိုင်းကုို ကြည့်ပြန်ရင်လဲ ကိုယ့်လူမျိုး ကုိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်သာသနာအတွက် နုိုင်ငံရေးလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ ရဟန်းတွေကို မြင်တွေ့နုိုင်ပါတယ်။ ပုဂံခေတ်က ရှင်ဒိသာပါမောက်တုို့ အင်းဝစွယ်ကြိုအရှင်သူမြတ်တုို့ ကိုလုိုနီခေတ်က ဦးဝိစာရတုို့ ဦးဥတ္တမတုို့ ဒါတွေ အားလုံးဟာ နုိုင်ငံတော်ရဲ့ အန္တရာယ်တွေကုို၊ ကိုယ့်လူမျိုးရဲ့ အန္တရာယ်တွေကို ကာကွယ်ဖုို့ နုိုင်ငံရေး လုပ်ခဲ့ကြတာ မဟုတ်လား။ ဒီတော့ အခုခေတ် ရဟန်းတော်တွေ နုိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်လာတာ အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။ ရှေးရုိုးစဉ်လာကို ချိုးဖောက်ပြီး လုပ်တာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့နုိုင်ငံတော်ကုို ကောင်းစေချင်တဲ့ ဆန္ဒ ကုိုယ့်ဘာသာသာသနာ အရှည်တည်တံ့စေချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေနဲ့ လုပ်ကိုင်ကြတာလုို့ဘဲ မြင်မိပါတယ်။
ရဟန်းတော်တွေ ပရဟိတနိုင်ငံရေး လုပ်တာ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ နုိုင်ငံရေးလုပ်တာ အပြစ်မှ မဟုတ်တာ။ ဒါပေမဲ့ နုိုင်ငံရေး အသုံးချခံတော့ မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့။ ဒီအတုိုင်းရဟန်းတွေ နုိုင်ငံရေးလုပ်နေရင် သာသနာကြီး မြန်မြန်ကွယ်တော့မှာဘဲလုို့ စုိုးရိမ်သူတွေလဲ စုိုးရိမ်နိုင်ပါတယ်။ စုိုးရိမ်တာ အပြစ်မှမဟုတ်တာ။ ပြီးတော့ သံကုို သံဖျက် သံချေးတက် (သာသနာကို ဘုန်းကြီးတွေဖျက်မှ ပျက်မယ်)တဲ့။ ပြောနေကြတာ။ မှန်သင့်သလောက် မှန်ပေမဲ့ ရာနှုန်းပြည့် မှန်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အမှန်က သာသနာကို အစုိုးရက ဖျက်မှ ပျက်တာပါ။ အစုိုးရဆုိုတာ နုိုင်ငံတော်ကုို အုပ်ချုပ်နေတဲ့ ဘာသာခြား အစုိုးရကို ဆုိုလုိုတာပါ။ အစုိုးရ မဖျက်ရင် သာသနာပျက်ဖုို့ အလွန်ခက်ပါတယ်။ သာသနာဆုိုတာ အလွယ်လေး ဖျက်လုို့မှမရတာ။ အိန္ဒိယဗုဒ္ဓသာသနာကုို ဘယ်သူဖျက်ခဲ့သလဲ။ ပုဂံခေတ်အရည်းကြီးသာသနာကို ဘယ်သူဖျက်ခဲ့သလဲ။ ရှင်းပါတယ်။ အဲဒီအချိန်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ အဲဒီအစုိုးရတွေ ဖျက်ခဲ့တာပါဘဲ။ ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ အစွမ်း ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ အာဏာကို သာမန်ပြည်သူတွေ သာမန်ရဟန်းတွေ ဖျက်လုို့ မပျက်နုိုင်ပါဘူး။ အစုိုးရစစ်တပ်အကူအညီနဲ့ အပြတ်ရှင်းမှ ပျက်နုိုင်မှာပါ။ ရေငုတ်မီးလှုံတုံးခုန်ဇယ်ခတ် သုိုင်းပေါင်းစုံ ဆေးပညာပေါင်းစုံ ဗေဒင်ပေါင်းစုံ တတ်မြောက်ထားကြတဲ့ အရည်းကြီးသာသနာကုို ဘယ်သူက အလွယ်တကူ ဖျက်နုိုင်မတုန်း။ အစုိုးရကဘဲ ဖျက်နုိုင်တယ်။
စဉ်းစားမိတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ မဟာယာနတွေရဲ့ ကွန်ဖူးပညာရပ်တွေ အရည်းကြီးတုို့ရဲ့ ဂါထာမန္တရားတွေ ဆေးအတတ်ပညာတွေ သင်ထားတတ်မြောက်ထားရင် သာသနာအတွက် အတော်လေး အသုံးဝင်မှာဘဲလုို့။ ကုိုယ့်သာသနာကိုယ့်လူမျိုးကို ကာကွယ်ဖုို့လေ။ အာဏာပါဝါရှိလေ လူတွေ မစော်ကားရဲလေ မဟုတ်လား။ ဒါကြောင့် အခုခေတ်ရဟန်းတွေ တုိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် တကယ့်စေတနာနဲ့ အလုပ်လုပ်နေတာမြင်ရင် အပြစ်မမြင်ဘူး။ လူအများ ကောင်းစေချင်လုို့ သူတုို့ဘ၀ကို အနစ်နာခံနေတာဆုိုပြီး ပိုတောင် လေးစားမိသေးတယ်။ ဘာမှမလုပ်ဘဲ (စာလဲမလုပ် တရားလဲမလုပ်ဘဲ) နေကြတဲ့ ရဟန်းတွေထက် စာရင် နုိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့ ဘုန်းကြီးကို ပုိုချီးကျူးမိတယ်။ ဘုန်းကြီးကိုမှ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျောင်းသား စစ်သား အားလုံးပါဘဲ။ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်မလုပ်ဘဲ နေတာနဲ့စာရင် နုိုင်ငံရေးလုပ်တာက ပိုမွန်မြတ်မယ်လုို့ ထင်ပါတယ်။
ပြီးတော့ စောင့်လေးမျိုးနွယ်ဆုိုပြီး ဘုရားရှင်ဟောထားခဲ့တာဟာလဲ နုိုင်ငံရေးအမြင်ရှိရှိနဲ့ ဟောထားခဲ့တာလုို့ ပြောရင်ရပါတယ်။ အမျိုးမစောင့်တဲ့နုိုင်ငံဆုို ပြဿနာပိုများတတ်တယ်မဟုတ်လား။ ဒါပေမဲ့ ဘုရားရှင်က ကိုယ့်ဘာသာကိုယ့်လူမျိုးကုိုဘဲ မျက်နှာလုိုက်ပြီး ဟောခဲ့တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးအတွက် ဟောခဲ့တာပါ။ ဆုိုလုိုတာက ဗမာလဲ ဗမာအမျိုးစောင့်၊ ကုလားလဲ ကုလားအမျိုးစောင့်၊ တရုတ်လဲ တရုတ်အမျိုးစောင့်။ အဲဒါဆုို ဘာပြဿနာမှ ဖြစ်စရာ မလုိုတော့ဘူး။ အမျိုးမစောင့်ဘဲ ဖြစ်သလုို ဒွေးရောယှက်တင် အကြင်လင်မယားဖြစ်နေကြရင် တချိန်ကျရင် ပြဿနာ ဖြစ်လာမှာဘဲ။ ဘယ်လောက်ဘဲ နားလည်မှုရှိရှိ ဘယ်လောက်ဘဲ ချစ်ချစ်။ အချစ်ကုန်တဲ့နေ့ အပြစ်ပုံချမဲ့နေ့ပါဘဲ။ ကိုယ့်လက်ထက်မှာ ပြဿနာရှင်းတယ် ဆုိုရင်တောင် ကိုယ့်ရဲ့ သားသမီးမြေးမြစ်လက်ထက် ပြဿနာတွေ တက်လာနိုင်တယ်။ မွေးချင်းအချင်းချင်းတောင် ပြဿနာတွေ ဖြစ်တတ်ကြတယ် မဟုတ်လား။ ကုိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်း ယူထားသူတွေအဖုို့ အခန့်မသင့်လုို့ ရိုက်လားပုတ်လား ဖြစ်ရင်တောင်မှ ပြဿနာ ဖြစ်စရာမလုိုပါဘူး။ အေးဆေး နေလုို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာသာခြား လူမျိုးခြားနဲ့ ယူထားပြီး စိတ်အခန့်မသင့်တဲ့အခါ ရုိုက်မိခုိုက်မိရင် တစ်စတစ်စနဲ့ ကမ္ဘာကြီး မီးလောင်နုိုင်တယ် မဟုတ်လား။
ဘယ်လုိုဘဲ ပြောပြော ဘုရားရှင်က လောကရေးရာတွေဖြစ်တဲ့ နုိုင်ငံရေး စီးပွါးရေး ပညာရေး လူမှုရေးတွေကို သုတ္တန်ဒေသနာတွေမှာ ထည့်ပြီး နည်းပေးလမ်းပြပေးထားခဲ့သလုို လောကမှ ထွက်မြောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ အမြိုက်အရသာကို အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်မှာ အကျယ်ဟောပြထားခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ အာဏာရှင်ပီပီ ဥပဒေပေါင်း သန်းပေါင်းများစွာကို ၀ိနည်းဒေသနာတော်မှာ စုပြုံ ထည့်သွင်းထားခဲ့တယ်။ အားလုံး ကြိုက်တာ ရွေးယူ အကောင်းတွေချည်းဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ရဟန်းပရိသတ်တွေကတော့ ဘုရားရှင်ရဲ့ အာဏာဒေသနာတော်အောက်မှာ ပြားပြားမှောက်အောင် ကြောက်နေကြရလေရဲ့။
မည်သုို့ပင် ရှိစေကာမူ အာဏာပြင်းလေ မီးငြိမ်းလေဘဲ မဟုတ်လား။ အထက်က ပြောခဲ့သလုိုပေါ့။ အာဏာရှင်ဆန်လေလေ သစ္စာရှိလေလေ။ စည်းကမ်းလုိုက်နာမှုရှိလေလေဘဲပေါ့။ မပျော်လဲ လုိုက်နာ ပျော်လဲ လုိုက်နာ။ မကြိုက်လဲ သစ္စာရှိ ကြိုက်လဲ သစ္စာရှိ။ ဗိုက်ဝလဲ သစ္စာရှိ ဗိုက်ဟာလဲ သစ္စာရှိ။ အေးရာ အေးကြောင်းဘဲပေါ့။
အဲ.. သစ္စာ အကြောင်းပြောရင်း ခွေးပုံပြင်လေးကုို ပြန်ပြေးမြင်ယောင်မိပါရဲ့။ ပုံပြင်ဆိုတော့ ပုံပြင်လုို့ဘဲ မှတ်ပေါ့။ ကမ္ဘာဦးအစက တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာမှ ရွာကြီးတစ်ရွာဘဲ ရှိသတဲ့။ အဲဒီရွာကြီးမှာ လူတွေအပြင် ခွေးတွေလဲ ရှိကြသတဲ့။ သိတဲ့အတုိုင်း ခွေးဆုိုတာ အစားကြီးတယ်မဟုတ်လား။ ဒါပေမဲ့ သူတုို့ ၀၀လင်လင် မစားရရှာပါဘူး။ သူတုိ့ရဲ့သခင်တွေ ကျွေးသလောက်ဘဲ မ၀ရေစာ စားနေကြရရှာတယ်။ အစာကိုသာ ၀အောင်မကျွေးတာ အလုပ်ကိုတော့ သေအောင်ခုိုင်းကြတယ်။ တစ်နေကုန် တောကောင်လုိုက်ခုိုင်းတယ်။ တောကောင် မလိုက်နုိုင်ရင် ရုိုက်တယ်။ အခန့်မသင့်ရင် သတ်ပစ်တယ်။ အရိုက်ခံရမှာ အသတ်ခံရမှာ ကြောက်တဲ့အတွက် ခွေးကလေးတွေဟာ သူတုို့ရဲ့သခင်အပေါ် ကြောက်လဲကြောက် သစ္စာလဲ ရှိပြကြရရှာသတဲ့။
အဲဒီလုိုနဲ့ အဲဒီရွာမှာ ရွာသူကြီး အပြောင်းအလဲ ဖြစ်လာသတဲ့။ သနားစာနာ ကြင်နာတတ်တဲ့ ရွာသူကြီးမုို့ တစ်ရွာလုံးက လေးစားကြသတဲ့။ အဲဒီရွာသူကြီး ရာထူးရရချင်း ဘာလုပ်သလဲဆုိုတော့ ခွေးအခွင့်အရေး ကုို အရင် လုပ်ဆောင်သတဲ့။ "ရွာသူရွာသားများခွေးပိုင်ရှင်များအားလုံး..... ခွေးများကို မ၀ရေစာ ကျွေးလာကြသည်မှာ ကြာလှချေပြီ။ ခွေးများလဲ ပိန်လှချေပြီ။ ဒီတော့ ဒီနေ့ကစပြီး ခွေးတစ်ကောင်ကို တစ်ရက် ဆန်တစ်ပြည်ချက် ချက်ကျွေးကြစေ.. သူကြီးအမိန့်."..ဆုိုပြီး သူ့ရဲ့ သူကြီးဖြစ်ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆုိုပွဲမှာ တစ်ချက်လွတ်အမိန့် ထုတ်သွားသတဲ့။ ဒီအမိန့်ကို ကြားတော့ ခွေးပိုင်ရှင်တွေက မချိသွားဖြဲ ရှိနေကြပေမဲ့ ခွေးများကတော့...အာဝု အာဝု အု အု အူးးးး ဆုိုပြီး ပျော်မဆုံးမော်မဆုံး ဖြစ်သွားကြသတဲ့။
အာဝု အာဝု ညာသံပေးလုို့
တစ်ပြည်ချက် စားနေရတဲ့ ခွေးတွေ မုိုးမမြင်လေမြင် အပျော်ကြီးပျော်နေကြသတဲ့။ အာဟာရပြည့်တော့ ခွေးရုပ်ခွေးရည်လေးတွေလဲ အပြည့်ပေါ့။ ဟုိုနားသွားပြုံးပြုံး ဒီနားသွားလဲ ပြုံးပြုံး။ ကောင်းလေစွ ကောင်းလေစွ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလုို တစ်ပြည်ချက်စားလာတာ တစ်နှစ်လောက်ရှိတဲ့အခါမှာတော့ ခွေးဇာတိတွေ ပြန်ပြလာကြသတဲ့။ ရွာသူကြီး သဘောကောင်းမနောကောင်းတာကုို အခွင့်အရေးယူတာလဲ ပါတာပေါ့။ တစ်နေ့မှာ ခွေးတွေ အားလုံးတုိုင်ပင်ပြီး သူကြီးအိမ်ရှေ့ကို ချီတက်သွားသတဲ့။ ဒါက ဘာဖြစ်လာပြန်ကြတာတုန်းဆုိုတော့။ "၀ူးး ၀ူးး အာဝု ၀ု ၀ု.. သူကြီးမင်းရယ် အခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာ သခင်တွေက အလုပ်တွေ အရမ်းခုိုင်းတဲ့အတွက် ဗိုက်က အမြဲဆာလောင်နေပါတယ်။ တစ်ရက်ကို တစ်ကောင် တစ်ပြည်ချက်နဲ့ ၀၀လင်လင် မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် တစ်ကောင်ကို နှစ်ပြည်ချက် အမိန့် ထုတ်ပြန်ပေးပါ...အဲဒါ လာတင်ပြတာပါ သူကြီးမင်း.."... ဆုိုပြီး ခွေးတွေအားလုံး ၀ူးဝူး ၀ုတ် ၀ုတ် ၀ုဝု အာဝု ဆုိုပြီး တပြိုင်နက် တောင်းဆုိုကြသတဲ့။ ဒီတော့ ရွာသူကြီးလဲ သနားတတ်သူပီပီ..." ခွေးများကို တစ်နေ့ တစ်ကောင် နှစ်ပြည်ချက် ချက်ကျွေးစေ.." ဆုိုပြီး ခွေးပိုင်ရှင်တွေကို အမိန့် ထုတ်ပြန်သတဲ့။
ဒီလုိုနဲ့ နောက်တစ်နှစ်ကြာလာပြန်တဲ့အခါ ခွေးအုပ်ကြီး ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ သူကြီးအိမ်ရှေ့ ပြန်ရောက်လာပြန်သတဲ့။ "၀ု ၀ု အိ အိ ၀ူးးး နှစ်ပြည်ချက်နဲ့ မလောက်ပြန်တော့ဘူး သူကြီးမင်း။ သုံးပြည်ချက်လုို့ သတ်မှတ်ပေးပါ" ဆုိုပြီး အဆုိုပြုလာပြန်ရော။ သူကြီးမင်းလဲ.. အေးလေ သူတုို့ တကယ် အစာမ၀ကြရှာဘူးထင်ပါတယ်၊ အမိန့် ထုတ်ပေးလုိုက်တာ ကောင်းပါတယ်ဆုိုပြီး... တစ်ကောင်ကုို တစ်နေ့ သုံးပြည်ချက် ချက်ကျွေးစေ..ဆုိုပြီး အမိန့် ထုတ်ပြန်တာပေါ့။
ခွေးတွေလဲ အပျော်လွန်ပြီး... အမလေး စားရချေသေးရဲ့ သုံးပြည်ချက်ကြီး သုံးပြည်ချက်ကြီး..ဆုိုပြီး ဖုံးမနုိုင်ဖိမရ ပျော်နေတော့သတဲ့။ ပိုင်ရှင်များမှာတော့ ရွာသူကြီးရဲ့ အမိန့်မုို့ မလွန်ဆန်နိုင်ဘဲ နေ့စဉ် တစ်ရက် ဆန်သုံးပြည်ချက်ပြီး ဟင်းတွေနဲ့ နှယ်ဖတ် ကျွေးမွေးနေကြရရှာသတဲ့။ ဒီလုိုနဲ့ တစ်ရက်သုံးပြည်ချက်စားပြီး ဗိုက်တွေတင်းပြီး ခွေးတွေ အပျင်းကြီး ပျင်းနေကြတော့သတဲ့။ သခင်က အလုပ်ခုိုင်းတဲ့အခါမှာလဲ ပျင်းရိပျင်းသွဲ့တွေ ဖြစ်နေကြသတဲ့။ ဒါပေမဲ့ သူတုို့ လောဘကိုတော့ အသောမသတ်နုိုင်ရှာကြသေးဘူး။
တစ်နေ့မှာ ထုံးစံအတုိုင်း ရွာထဲက ခွေးတွေအားလုံးစုပြီး ရွာသူကြီးအိမ်ရှေ့သွားကာ ခွေးခေါင်းဆောင် ကပ္ဗတိန်အောင်နက်က လော်ကြီးနဲ့ အော်ရောဆုိုဘဲ။ "၀ူးး ၀ူးးးးဝူးးးးး သူကြီးမင်း တစ်ရက် သုံးပြည်လဲ မလောက်ပြန်ဘူး၊ ခဏလေးနဲ့ အစာကြေပြီး ဗိုက်ပြန်ပြန်ဆာလာတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ရက် လေးပြည်ချက် ချက်ကျွေးရမယ်ဆုိုပြီး အမိန့် ထုတ်ပေးပါ..." လုို့ အသံကျယ်လောင်စွာ အော်ပြီး တောင်းဆုိုသတဲ့။ နောက်လုိုက်နောက်ပါ ခွေးများကလဲ "၀ုတ်ပါဒယ် မှန်ပါဒယ်" ပေါ့။ ဒီတော့ ရွာသူကြီးက စဉ်းစားသတဲ့။ ဒီခွေးတွေက အခွင့်ပေးရင် ပေးသလောက်ယူမဲ့ ကောင်တွေဘဲ။ ငါ သနားတတ်တာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး အားမနာ လျာမကျိုး လာတောင်းဆုိုကြတယ်။ ဒီအတုိုင်း သူတုို့တောင်းဆုိုတုိုင်း အမိန့် ထုတ်ပြန်ပေးနေရရင် ရွာသားတွေလဲ အမြင်ကြည်ကြတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့ ဒီခွေးတွေကလဲ ဗိုက်ဝရင် သခင်ကိုတောင် သခင်မှန်း သိချင်ကြတော့တာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ ဒီလုို လုပ်တာ ကောင်းမယ်။
ရွာသူကြီးက ရွာသားတွေ အားလုံးကို ချက်ချင်း အရေးပေါ် ခေါ်ယူလုိုက်တယ်။ မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာဘဲ ရွာသားတွေ အားလုံး သူကြီးအိမ်ရှေ့ရောက်လာကြတယ်။ ခွေးတွေကလဲ သူတုို့ လုိုချင်တာကို တောင်းဆုိုလုို့ ကောင်းနေကြတုန်း။
ထုို့နောက်.. ခွေးခေါင်းဆောင် ကပ္ဗတိန်အောင်နက်ထက် အသံပုိုကျယ်စွာဖြင့် ရွာသူကြီးက အမိန့် ထုတ်ပြန်လုိုက်တယ်။
"ကြွရောက်လာကြတဲ့ လူအပေါင်း ခွေးအပေါင်းတုို့... အခုဆုိုရင် ရွာသားတွေအားလုံး ခွေးအပေါင်းအားလုံး သူကြီးအိမ်ရှေ့ ရောက်နေကြပါပြီ။ အောင်နက်ဦးဆောင်တဲ့ ခွေးတွေက တစ်ရက်ကို ဆန်လေးပြည်ချက် ချက်ကျွေးဖုို့ အမိန့် ထုတ်ခုိုင်းလာတာ ဖြစ်တယ်။ ဟို အရင်က သူတုို့ကို သနားငဲ့ညှာပြီး တစ်ပြည်ချက်ကို အရင် ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ သူတုို့က နှစ်ပြည်ချက် ထပ်တောင်းဆုိုလာတယ်။ နှစ်ပြည်ချက် ခွင့်ပြုလုိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာ သုံးပြည်ချက် တောင်းဆုိုလာပြန်တယ်။ အခု ဒီနေ့ ထပ်ပြီး လေးပြည်ချက် တောင်းဆုိုလာပြန်တယ်။ လုိုက်လျောမှန်းသိတဲ့အတွက် တောင်းဆုိုမှုတွေက များပြားလာတယ်။ သနားတတ်မှန်းသိတဲ့အတွက် အခွင့်အရေးအများကြီး ယူလာတယ်။ ဗုိုက်ဝလာတဲ့အခါ သခင်ကို သစ္စာစောင့်သိမှု နည်းပါးလာတယ်။ ဒီတော့ ရွာသူရွာသားအပေါင်း ခွေးအပေါင်းတို့ အခု သူကြီး အမိန့်တော်ချမယ်။ အားလုံး နားစိုက်စိုက် ထောင်ကြပါ။ ခွေးပိုင်ရှင်များကလဲ မိမိတုို့ရဲ့ ခွေးများကို ကျွေးချင်သလောက်သာ ကျွေးကြပါ။ ခွေးများအားလုံးကလဲ မိမိတုို့ရဲ့ သခင်ကျွေးသလောက်ဘဲ စားကြပါ။ တစ်ပြည်ချက် နှစ်ပြည်ချက် သုံးပြည်ချက် ဥပဒေတွေကို ဒီနေ့ကစပြီး ဖျက်သိမ်းလုိုက်ပါတယ်။ အစာ ၀၀ မစားရပေမဲ့လဲ ခွေးများအားလုံး မိမိတုို့ရဲ့ သခင်ကို အသက်စွန့်ပြီး သစ္စာရှိကြပါ။ အမိန့်တော်"
(ဟေးးးး ဆုိုသည်မှာ ရွာသူရွာသားများ၏ ပျော်ရွှင်သည့်အသံ ဖြစ်သည်။ အုဟုဟု ဆုိုသည်မှာ ခွေးများ၏ ၀မ်းနည်းပက်လက်အသံဖြစ်သည်။)
ခွေးများအားလုံး ရွာသူကြီးထံ မျက်ရည်ခံ ထုိုးကြတယ်။
"သူကြီးမင်းရယ်... သနားပါဦး။ တစ်ချို့ခွေးတွေမှာ ကလေးတွေလဲ တသီကြီးနဲ့... ပြီးတော့ နေလဲ ကောင်းကြတာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီတော့ ဒီလုို လုပ်ပါလား သူကြီးမင်းရယ်။ ဒီနေ့ လာတောင်းဆုိုတဲ့ လေးပြည်ချက်ကို ခွင့်မပြုချင်နေပါ။ နဂုို သုံးပြည်ချက်ကလေးအတုိုင်းတော့ ထားပေးပါနော်"
"ဟိတ်... ငါ သူကြီးမင်း ပြောတဲ့အတုိုင်း နားထောင်။ ခံမပြောနဲ့ ခုိုင်းတာလုပ် ခုံနဲ့ရိုက်လုိုက်လုို့ ခွေးမသာပေါ်သွားမယ်.."
သူကြီးမင်းက ပွဲကြမ်းပြလိုက်တော့ ခွေးတွေလဲ နှုတ်ဆိတ်ပြီး ငြိမ်နေရရှာတော့တယ်။ အဲဒီလုိုနဲ့ ကမ္ဘာဦးအစ အဲဒီနေ့ကစပြီး ဒီနေ့အချိန်ကာလအထိ ခွေးများဟာ သခင်ကျွေးသလောက်သာ စားကြရပြီး သူတုို့ရဲ့ သခင်ကိုလဲ အသက်နဲ့ ရင်းကာ သစ္စာရှိပြကြရတော့သတဲ့ကွယ်။ ခွေးတွေရဲ့ဘ၀ ဒီလုို ကျွေးသလောက်ဘဲ စားရတဲ့ ဘ၀အဖြစ်နဲ့ ရပ်တည်ရတာဟာ ရွာသူကြီးရဲ့ အပြစ်လား၊ ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ အပြစ်လား၊ ခွေးတွေရဲ့ အပြစ်လားဆုိုတာကုိုတော့ ကလေးတုို့ဖာသာ စဉ်းစားကြပေါ့ကွယ်။ ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါဘဲကွယ်။ ။
သဗ္ဗေသတ္တာ အဝေရာ ဟောန္တု ။
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 04:103comments:
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 12:31 No comments:
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 11:53 No comments:
Posted by သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) at 00:393comments: